यी हुन् श्रीमानलाई समेत थाहा नहुने महिलाका ७ गोप्य रहस्य ! – Annapurna Post News
यी हुन् श्रीमानलाई समेत थाहा नहुने महिलाका ७ गोप्य रहस्य !
April 13, 2022 April 13, 2022 sujaLeaveaComment on यी हुन् श्रीमानलाई समेत थाहा नहुने महिलाका ७ गोप्य रहस्य !
अध्ययनअनुसार महिलाहरुले केही कुरा सधै गोप्य नै राख्ने गरेको पाइएको छ । ती कुरा धेरलाइ थाहा हुदैन । गोप्य कुराको नजिकका साथी र श्रीमानलाइ समेत थाहा हुदैन ।
– एक महिलाले अर्की महिलाको डाहा गर्दछन् तर पुरुषलाई थाहा हुदैनकी एक महिलाले अर्की महिलालाई मन पराउछन् । उनीहरुले अर्की महिलाको सौन्दर्य स्टाइललाई शरिरको फिगरको पनि डाहा गर्ने अध्यनले देखाएको छ ।
– महिलाहरुले आफनो पुर्व प्रेमीप्रति चासो राख्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । महिलाले उनको पहिलो ब्याइफेण्डसंग कुन केटीसंग अफेयर चलेको छ । यो केटी आएपछि केटाको जीवनमा के परिवर्तन हुदैछ भने चियो गर्छन् ।
– पो र्न फिल्म प्रति चासो : महिलाहरु पो र्न फिल्म हेर्न मन पराउने गरेको अध्यनले देखाएको छ । उनीहरुले लुकी लुकी पो र्न फिल्म हेर्ने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
– आफनो शरिरलाई माया : महिलाहरु आफनो शरिरलाई देखाउन चाहन्छन् ।आफनो शरिरलाई नै मन पराउने गर्दछन् ।उनीहरुले पुरुषहरुलाइ आफनो शरिर देखाएर आर्कषित गर्छन् ।
– प्राय महिलाहरु एकै हुँदा पनि मस्ती गर्न मन पराउने गर्दछन् । महिलाहरु एक्लै भएको समयमा ऐनाको सामुन्ने नाच्ने , बिभिन्न पोज दिएर सेल्फी फोटो खिच्ने , मेकअफ गरेर मस्ती गर्छन।
– पुरुषको डाहा : धेरै महिलाले पुरुषप्रति डाहा गर्ने गरेका हुन्छन् किनभने पुरुषहरु महिनावारी हुदैन , पुरुषलाई नै महिनासम्म बच्चा कोखमा राख्नु पर्दैन , बच्चा जन्माउनु पर्दैन, त्यस बखत हुने पि-डा खप्नु पर्दैन जस्ता क्रियाकलापकले महिलाहरु पुरुषको डाहा गर्ने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
– पुरुष प्रति जासुस: महिलाहरु प्राय आफनो जीवन साथीको हरेक कुरामा जासुस गरिरहेका हुन्छन् । पुरुषको धेरै कुरा थाहा पाउनका लागी गोप्य रुपमा जासुस गरिरहेका हुन्छन् ।
यो पनि- विवाहपछि युवतीमा आउँछ यस्ता परिवर्तन
विवाहपछि युवतीले आफ्नो घर छोडेर नयाँ घरमा बस्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ घरको चाल चलनलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
महिलाले विवाहसँग घर मात्रै परिवर्तन गरेका हुँदैनन् सम्बन्ध पनि परिवर्तन भएका हुन्छन् । छोरीबाट बुहारी बनेका हुन्छन् । नयाँ परिवेशमा नयाँ चुनौतीको सामना गर्न परिरहेको हुन्छ । छोरी या युवतीबाट बुहारी बनेपछि महिलामा केही परिवर्तन आउँछ । जे सुकै परिवर्तन आएपनि त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पतिलाई पर्छ ।
विवाह भन्दा पहिला युवतीहरुले आफ्नो फिगरलाई विशेष ध्यान दिने गरका हुन्छन् । राम्रो फिगरका लागि खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिएका हुन्छन् । तर विवाह पछि उनीहरुको ध्यान अन्तै केन्द्रित हुन जान्छ । उनीहरु विवाह भन्दा पहिला शरीरलाई स्फूर्त राख्नका लागि निकै मिहेनत गर्छन् तर विवाह पछि कसलाई देखाउनु छ र ? भन्दै वेवास्ता गर्छन् । जसका कारण उनीहरूको शरिर बिग्रन सक्छ ।
हिसाब किताबमा सक्रिय
विवाह भन्दा पहिला घरायसी खर्चमा कुनै वास्ता नराख्ने युवती विवाह गरेर गएपछि भने आर्थिक कारोबारमा सक्रिय बन्न खोज्छन् । विवाह भन्दा पहिला बैंकमा खाता नहुने र खोल्ने आवश्यकता नठान्नेहरुले समेत विवाह पछि बैंकमा खाता खोल्छन् भने घरायसी हिसाबकितामा पनि सक्रियता जनाउँछन् । कसले कति कहाँ खर्च गर्यो, पतिलाई खर्च विवरण माग्ने लगायतका काम गर्छन् ।
विवाह भन्दा पहिला कतै गएको बेलामा आमाले फोन गरेमा झ-र्कने छोरीले विवाह गरेपछि आमालाई आफैं फोन गर्छन् भने आमाको फोनको प्रतिक्षा गर्छन् । विवाहपछि आमालाई धेरै महत्व दिने र विवाह गरेर गएको सासू र परिवारलाई कम महत्व दिने भएका कारण पनि कयौं घरहरुमा वि-वाद हुने गरेको छ ।
विवाह भन्दा पहिला बहिनी वा भाउजु वा अरुले के लगाए वा के किने भन्ने कुरामा युवतीको खासै चासो रहँदैन । आफूलाई मन परेको र मर्जी अनुसारका कपडा र अन्य गरगहनामा चासो राखेका हुन्छन् तर विवाह गरेर गएपछि नन्द वा जेठानीसँग प्रतिस्पर्धा शुरु हुन्छ । कपडा, फेसन लगायत हरेकमा नन्द जेठानीसँगको प्रतिस्पर्धा शुरु हुन्छ । नन्दले वा जेठानीले यसो गरिसकी भन्दै उनीहरुको मन शान्त रहन सक्दैन ।
हरेक युवतीले विवाह पछि गुनासो गर्छन् । विशेषगरि पतिसमक्ष उनीहरुको गुनासो हुन्छ । तपाई पहिलाको जस्तो हुनुहुन्न । फेरिनुभयो जस्तो शव्द उनीहरुको नियमित बन्न जान्छ । विवाह पछि पनि व्यक्ति वा पुरुष पहिलाको जस्तै कसरी रहन सक्छ र ? भन्ने चाहिँ उनीहरुले सोच्दैनन् । ।
पारिवारिक झमेला, सम्बन्ध र जिम्मेवारीले गर्दा सबै परिवर्तन हुन्छन् भन्ने दुबै पति र पत्नीले बुझ्ने हो भने समस्या नै पर्दैन ।
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, २०७९ बैशाख १ गते बिहीबार, नयाँ बर्षको पहिलो दिन तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
बैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए मानिस जसरी नै च्याउहरु एक आपसमा कुराकानी गर्ने गरेको तथ्य
एउटा अस्पतालका १० नर्स र १ डाक्टर एकसाथ गर्भवती, एकैदिन डेलिभरी डेट आएपछि…
काठमाडौंमा १३ वर्षीया बालिकामाथि ४१ वर्षीय प्रकाश श्रेष्ठले…..